LA OGAADAY: Gareth Bale Oo La Ogaaday Inuu Qolka Lebbiska Liverpool Ku Jiray 20 Daqiiqadood Kaddib Ciyaartii Finalka Champions League & Waxa Uu Ka Qabanayey – GOOL24.NET
LA OGAADAY: Gareth Bale Oo La Ogaaday Inuu Qolka Lebbiska Liverpool Ku Jiray 20 Daqiiqadood Kaddib Ciyaartii Finalka Champions League & Waxa Uu Ka Qabanayey
Xiddiga Real Madrid ee Gareth Bale ayaa si toos ah u abbaaray qolka lebbiska Liverpool markii ay dhamaatay ciyaartii finalka Champions League oo laba gool oo uu qaybtii dambe dhaliyey ay kooxdiisu ku qaadday koobka.
Bale ayaa u tegay Liverpool halkii uu geli lahaa qolkii ay ku jireen ciyaaryahannada Real Madrid isla markaana uu farxadda la qaybsan lahaa, waxaana uu warkani suuqa soo galay xili lala xidhiidhinayo kooxda Manchester United.
Sida uu qoray wargeyska wariyaha Craig Hope oo ka tirsan wargeyska Daily Mail, Bale ayaa booqday xiddigaha Liverpool oo uu ku jiro saaxiibkiisii hore ee ay isku kooxda ahaayeen eee Adam Lallana oo ay u wada ciyaari jireen Southampton ka hor intii aanay Tottenham iyo Liverpool u kala wareegin, waxaana uu la wadaagay dareenka tacsida isaga oo qalbiga u qaboojiyey.
Halyeygii Liverpool ee Robbie Fowler ayaa isaguna sheegay in Bale uu noqday qofkii ugu horreeyey ee ciyaartoyga Liverpool uga tacsiyeeya guul-darrada, isla markaana uu dabbaal-degga kooxdiisa ka doorbiday tacsida Liverpool.
Arrinka xiisaha weyn leh ayaa waxa uu yahay wakhtiga uu ku sugnaa qolka lebbiska oo ahayd 20 daqiiqadood, xilligaas oo ciyaaryahannada Real Madrid ay ku jireen damaashaad, sawirro ay gelayeen iyo xidhiidh ay la samaynayeen qoysaskooda iyo asxaabtooda.
Falkan oo dhacay inyar kaddib markii uu Bale warbaahinta u sheegay inuu wakiilkiisa kala xaajoon doono mustaqbalkiisa, isla markaana uu dhegaysan doono dalabyada uu hayo, ayaa waxa uu dabka kusii shidayaa sida aanu ugu faraxsanayn Los Blancos, taas oo uu u arko in tababare Zinedine Zidane uu bahdilaad ku sameeyey markii uu kulankii finalka fadhiisiyey.
Ma aha markii ugu horreysay ee Gareth Bale oo warbaahinta la wadaago sida aanu ugu faraxsanayn Real Madrid, hase yeeshee sannadkii hore ayaa uu agaasimaha ciyaaraha ee Real Madrid, Jorge Valdano u sheegay warbaahinta in weli uu Bale la dhibaatoonaya barashada luuqadda Spanish-ka, taas oo ku adkaatay inuu fahmo.
Bale oo ay da’diisu tahay 28 jir, ayaa marka uu dhamaado Koobka Adduunku waxa kala caddaan doonta inuu kusii negaan doono Real Madrid iyo inuu Manchested United u dhaqaaqi doono.